Dress Overall Dress Overall | Trends Buddha - Buddhatrends
Vondrona iray / Green
Ity akanjo lava voninkazo ity dia fampakaram-boninahitra lehibe amin'ny fiakanjoan'ny vehivavy iray izay tia ny trano fidiovana feno akanjo marevaka sy marevaka izay afaka mifanandrina amin'ny fotoana tsy ampoizina. Ity akanjo ity dia safidy tsara ho an'ny vehivavy mikendry ny hampifangaroana loko mavomavo miaraka amin'ny endrika kanto. Mirehareha amin'ny endriky tsy mahazatra miaraka amin'ny endri-tsoratra Silhouette A, safidy tsara ny fialantsasatra haingam-pandeha mankany amin'ny valan-javaboary na manodidina ny sakana.
STYLE: Ny fomba fanoratr'ilay printy dia mahatonga azy io ho fomba tsotra hanatsaràna lobaka mitovitovy na matevina tsy misy fisalasalana loatra na manintona loatra. Izany dia mahatonga azy ho tsara fitondran-tena miaraka amin'ny namana na fitsangatsanganana haingana mankany amin'ny mpivarotra.
DESIGN: Amin'ny fehin-kirany mahazatra amin'ny tavy voajanahary sy lafo, tady fanamafisam-peo sy A-line silhouette, ity akanjo volom-boninkazo ity dia miavaka tsara amin'ny ankapobeny, ary manome antoka fa tsy mila manao fanitsiana izany ianao aorian'ny fividiananao satria Vonona ny hitafy izy. Mirehareha amin'ny tetika tsotra miaraka amin'ny paosiny sy bokotra mahafinaritra izy io, azo atao toy ny akanjo lava isan'andro, tsy hijerena vetivety, tsy mahasosotra na mahasosotra.
Mpankafy akanjo akanjo marevaka sy marevaka ary tena tsy mandeha amin'ny ratsy. Ny freestyle amin'ny ankapobeny dia mahatonga azy ho tsara fitondran-tena samihafa ary safidy tsara ho an'ny vehivavy izay manome lanja ny fampiononana amin'ny akanjon'izy ireo.
Size: free, Length: 130cm Waist: 86cm Hip: 114cm Wai: 146cm
Model size: Height: 168cm Bust: 85cm Shoulder: 40cm Waist: 72cm Weight: 49kg
Patchwork Lily Hippie Dress $39.60 $66.00
Patchwork Polka Dots Hippie Dress $54.00
Boho Chic Maxi akanjo miaraka amin'ny akanjo $53.40 $89.00
Dress Empire Dress $40.20 $67.00